RASMI: Marcus Rashford oo ku guuleystay abaal-marinta bisha November ee Kooxda Manchester United - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Marcus Rashford oo ku guuleystay abaal-marinta bisha November ee Kooxda Manchester United
December 2, 2019 79
(Manchester) 02 Dis 2019. Marcus Rashford ayaa loo codeeyey inuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicaa Kooxda Manchester United bishii la soo dhaafay ee November kaddib bandhig cajiib ah oo uu sameeyey.
Weeraryahankan ayaa afar kulan saftay bishaas, wuxuuna dhaliyay saddex gool, isagoo ka horyimid Kooxaha Partizan Belgrade, Brighton & Hove Albion iyo Sheffield United.
Xiddiga xulka qaranka England ayaana leh 11 gool illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Rashford waxa uu helay 53% codadkii la dhiibtay, waxaana uu sidaas ugu guuleystay abaal-marinta bisha markiisii ugu horreysay kal ciyaareedkan, kaddib Daniel James (August) iyo Scott McTominay oo ku guuleystay October & November.
Marcus ayaa waxa uu tartanka abaal-marintan ku garaacay labada ciyaaryahan ee Brandon Williams iyo Mason Greenwood, kuwaasoo kala galay kaalimaha labaad iyo saddexaad, Williams ayaa kaalinta labaad galay kaasoo helay 37% codadkii la dhiibtay, halka Greenwood uu helay 10% codadkii taageerayaasha.
Marcus Rashford ayaa dhaliyey 3 gool afar kulan oo uu ciyaaray bishii la soo dhaafay ee November sidaas ayuuna ku hantiyey abaal-marinta laacibka bishii hore ugu fiicnaa kooxda Manchester United.
Climbing to Ethiopia’s church in the sky – Washington Post
Shir ku saabsan biyo xidheenka Abay oo Jig jiga lagu qabtey.
Horyaallada Serie A iyo Bundesliga oo qaab cusub loo ciyaari doono, xitaa marka garoomada lagu soo laabto
By admin April 2, 2020
Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha June ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey…. (Kooxaha Man United & Wolves oo min labo ku leh)